ငြိမ်းချမ်းရေး ချောတိုင်များ – JIS.DIGITAL
၁၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ခုနှစ် ။
ဂီတစာဆို ၊ ဂီတမှူး ၊ ကျောင်းဆရာ၊ တော်လှန်ရေးသမား စတဲ့ ဘဝအကြောင်းစုံလှတဲ့ မွန်ပြည်နယ်အခြေစိုက် သတင်းစာဆရာ ဗညားအောင်ရဲ့ လက်ရာများ . . .
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဥက္ကဌရဲ့ အမှာစာ ၊ အင်တာနယူးစ်မြန်မာရဲ့ အမှတ်တရာစာနဲ့အတူ မွန်တော်လှန်ရေးနိဒါန်း ၊ အတိတ်သမိုင်းနဲ့ လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဥ်အတွင်း အနိမ့်အမြင့်၊ အတက်အကျနဲ့ အနာဂတ်ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးကို မျှော်တွေးဆဝါးနိုင်မယ့် သတင်းဆောင်းပါးပေါင်း (၂၁) ပုဒ် . . .
အစိုးရအဆက်ဆက်တို့သည် ရိုးသားဖြောင့်မှန်တရားမျှတသော ဖြေရှင်းမှုမဟုတ်သဖြင့်ယနေ့တိုင် မပြေလည်နိုင်ဘဲ ရှည်ကြာနေရသည်
နိုင်ဟံသာ – မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဥက္ကဌ
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အလုပ်လုပ်သူများဖတ်ရှုရန်သင့်တော်သလို အချက်အလက်များစုဆောင်းရာတွင်လည်း အကျိုးရှိမည်ဟု ယူဆမိပါသည်။
မိုက်ကယ်ပန် – အင်တာနယူးစ်မြန်မာ
စာအုပ်တန်ဖိုး – ၃၀၀၀ ကျပ်သာ ရှိတဲ့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဥ်အား လေ့လာလိုသူများ၊ စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် ဖုန်း – ၀၉ ၇၇၉၈၁၆၄၄၁ ၊ ၀၉ ၂၅၅၇၉၆၇၀၂ သို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါတယ်။
ယခုစာအုပ်ပါ Layout Design , Publication နှင့် Printing ပိုင်း အားလုံးကို ရွှေကလောင်စာပေ ၊ JIS.DIGITAL မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အပ်နှံပေးပါသော သတင်းစာဆရာ ဆရာဗညားအား အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း မှတ်တမ်းပြုအပ်ပါသည်။
Tags: ငြိမ်းချမ်းရေး ချောတိုင်များ ဗညားအောင် ရွှေကလောင်စာပေ
Previous စစ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်၏ လားရာ